Mifidy Filoha Vaovao i Boligaria, Saingy Iza No Mahalala Izay Hanjò ny Praiminisitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Novambra 2016 4:43 GMT
Nilatsaka tamin'ny 13 Novambra ny taratasy fametraham-pialan'i Borisov, rehefa resin'i Rumen Radev, kandidà mahaleotena tohanan'ny Antoko Sosialista Boligara, tamin'ny fifidianana filoham-pirenena i Tsetska Tsacheva, mpikambana ao amin'ny antoko politika Olom-pirenena mankamin'ny Fampandrosoana Eoropeana ao Boligaria (GERB).
Namaritra an'i Radev ho mpanao politika manana fomba fijery “mpomba ny Rosiana” ny haino aman-jery tandrefana toy ny Reuters sy ny mpanao gazety sasany ao Boligaria.
Rehefa avy nandresy kandidà 20 hafa i Radev, dia handray ny toerany amin'ny 22 Janoary amin'ny taona ho avy. Manana 2 volana sy tapany ny filoha ankehitriny Rosen Plevneliev araka izany hanangana governemanta vaovao. Tamin'ny taratasy ho an'ny mpikambana ao amin'ny governemanta Boligara, nilaza ny Praiminisitra Borisov fa vonona hijanona amin'ny toerana izy mandra-panendrena izay hisolo azy. Nanazava ny faniriany hametra-pialàna i Borisov ho fepetra ilaina ho setrin'ny fifidianana vao haingana, izay nilazan'ireo mpifidy tamin'ny fomba mazava ny tsy fahafaham-pon'izy ireo amin'ny fitondran'ny governemanta ankehitriny.
Miaraka amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity volana ity, nanatontosa fitsapankevi-bahoaka amin'izay mety ho fiovana amin'ny rafi-pifidianana sy ny fitsipika momba ny famatsiam-bola ho an'ny antoko ara-politika ao amin'ny firenena ihany koa i Boligaria. Noho ny taham-pahavitrihana ambany, tsy nahatratra ny quorum (isa kely indrindra tratrarina) ny voka-pifidianana, saingy nahazo fanohanana tamin'ny maro an'isa vitsivitsy ny tolo-kevitra ary mbola tsy maintsy hiadian-kevitra ao amin'ny Antenimieram-pirenena.
Tamin'ny fanadihadiana nivoaka tao amin'ny gazety “Dnevnik,” nampiseho tranga isan-karazany mety hiseho ao Boligaria ireo tonian-dahatsoratra, taorian'ny fiovam-pitantanana. Araka ny filazan'ny gazety, tafiditra ao anatin'ny fanontaniana ihany koa ny krizy ara-politika hafa ao amin'ny firenena.
Ankehitriny, taorian'ny naneken'ny parlemanta ny fametraham-pialan'i Borisov tamin'ny 16 Novambra, nanolotra ny toerana praiminisitra ho an'ny mpikambana iray ao amin'ny GERB, antoko politika lehibe indrindra ao amin'ny firenena, ny filoha. Manan-jo handà ny tolotra ny antoko. Antony iray mety hahatonga azy ireo handà izany ny fananganana fanohanana ho an'ny antokon'izy ireo – mety hahatsaratsara toerana kokoa ny antokony ny korontana ara-politika aorian'izany. Raha izany no mitranga, mety hilatsaka any amin'ny antoko lehibe indrindra faharoa ao amin'ny parlemanta indray ny tolotra. Raha mbola voatsipaka indray ao anatin'ny herinandro, afaka mandefa ny tolotra any amin'izay antoko ao amin'ny parlemanta safidiany ny filoha. Raha mbola tsy mahomby ihany koa izany, mila manangana “governemanta vonjimaika”, no sady miantso ny hanaovana fifidianana alohan'ny fotoana amin'ny Martsa 2017 ny filoha.
Na dia nanan-jo hitsipaka ny taratasy fametraham-pialàn'ny praiminisitra aza ny parlemanta, tsy nampihatra izany i Borisov.
“Miatrika olana azo nosorohana isika,” hoy i Nayden Zelenogorski, mpiara-mitantana ny fikambanan'antoko afovoany ankavanana tamin'ny fahitalavi-pirenena. Nampitandrina ny solontenan'ny antoko politika manana fisiana ao amin'ny parlemanta i Zelenogorski fa tsy haharitra enim-bolana fara fahakeliny ny fanjakana, noho ny fivadihan-draharaha vao haingana.
Tsy niombo-kevitra tamin'izany vinavina izany i Vladimir Karolev, mpanao politika sy mpandalina ara-toekarena, nitanisa tao amin'ny Facebook mikasika ireo andiana “fanambarana tsy marina mihitsy nataon'ireo mpanolo-tsaina tamin'ireo mpanao politika sy mpanoratra ny fanadihadiana amin'ny haino aman-jery.”
Nilaza ny maro tamin'ireo mpisera aterineto Boligara fa tsy kisendrasendra ity fisehoan-javatra ity. Tamin'ny lahatsoratra tao amin'ny Facebook, nilaza i Ianna Georgieva hoe:
Jeni Koleva nisioka ny fahitàny ny toe-pon'ny olona amin'ny ankapobeny:
Olom-pirenena Boligara iray hafa, Vladimir Lukov, nanontany tamim-panesoana tao amin'ny Facebook mikasika izay hitranga manaraka, sy hoe inona no tokony antenain'ny mpifindra monina sy ny olona misotro ronono Boligara amin'ny hoavy: